Man City oo hoggaanka u qabatay horyaalka Premier League, kaddib markii ay guul raaxo leh ka soo heshay West Bromwich… +SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 27 Jan 2021. Manchester City ayaa guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda West Bromwich oo ay ku booqatay garoonka The Hawthorns, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-5, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca 20–aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-3 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester City.
Daqiiqadii 6-aad Manchester City ayaa durba hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay xiddigooda reer Germany ee Ilkay Gundogan, kaadib markii uu caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Joao Cancelo.
22 daqiiqo marka ay dheeshu aheyd Manchester City oo u muuqatay koox ay ka go’neyd inay gacanta ku dhigto saddexda dhibcood ayaa waxay dhalisay goolkeeda labaad, kaddib markii uu 0-2 ka dhigay Joao Cancelo, oo caawin ka helay Bernardo Silva.
Ilkay Gundogan ayaa daqiiqadii 30-aad niyadjabiyay kooxda West Bromwich Albion, wuxuuna dheesha ka dhigay 0-3 ay ku hoggaamineysay Manchester City.
Daqiiqadii 45-aad Manchester City ayaa sii dheereysatay hoggaanka dheesha kaddib markii uu 0-4 ka dhigay Riyad Mahrez, waxaana goolkan caawintiisa lahaa Raheem Sterling.
Daqiiqadii 57-aad Raheem Sterling oo caawin ka helay saaxiibkiis Riyad Mahrez ayaa hoggaanka u sii dheereeyay kooxdiisak Man City wuxuuna dheesha ka dhigay 0-5.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 0-5 oo ay Manchester City kaga soo adkaatay kooxda West Bromwich Albion oo ay ku booqatay garoonka The Hawthorns, Sky Blue ayaa hoggaanka u qabatay miiska kala sareynta horyaalka Premier League, iyaga oo leh 41 dhibcood.